ny tranokalanao e-varotra - Amazon, Ebay, Allegro ary Etsy miaraka amin'ny Propars E-export
Manondro ny fampidirana e-varotra
Tantano ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena avy amin'ny tranokalan'ny e-varotrao miaraka amin'ny Propars
Vokatra / baiko e-varotra
Tena mora ny mandefa e-mail amin'ny tranokalan'ny e-varotra misy Propars!
Ny tahiry rehetra dia arahana ho azy. Hita taratra eo noho eo ny fanovana ny vidiny sy ny stock.
Azonao atao ny mamindra ny vokatrao amin'ny tranokala e-commerce mankany Propars miaraka amin'ny XML.
Araka ny rafitry ny sokajy ao amin'ny tranokalan'ny e-varotrao, azonao atao ny manokatra ny vokatrao amidy eny an-tsena.
Miaraka amin'ny fanavaozana mandeha ho azy, ny vokatra vao nampidirina ao amin'ny tranokala e-varotrao dia hita taratra ao amin'ny Propars, ary ny magazay sy ny tahirinao eo amin'ny tsena dia havaozina.
Azonao atao ny manova ny tahiry sy ny vidiny amin'ny alàlan'ny fitazonana ny tranokalan'ny e-varotra anao hatrany.
Ny fanovana vidiny ataonao eo amin'ny tranokalan'ny e-varotrao dia hita taratra eo amin'ny tsena fivarotana ny vokatra.
Amin'ny vahaolana Propars e-export, azonao atao ny manondrana e-commerce avy amin'ny tranokalan'ny e-varotrao.
Tantano ny e-varotra amin'ny efijery tokana miaraka amin'ny fampidirana ny tsenan'i Propars
Angony ny baikonao rehetra amin'ny efijery tokana, faktiora amin'ny tsindry iray! Afaka mamoaka e-faktiora amin'ny ampahany amin'ny baiko avy amin'ny tsena sy tranokala e-varotra; Azonao atao ny manonta ny endrika entana betsaka.